इन्डोनेसियामा रोहित बने ‘म्यान अफ द म्याच’ ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
इन्डोनेसियामा रोहित बने ‘म्यान अफ द म्याच’ !
इन्डोनेसियन लिग वानमा पर्सिजा जाकार्ताको जितमा नेपाली फुटबर रोहित चन्द ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित भएका छन् ।
इन्डोनेसियन लिग वान फुटबलमा मंगलबार भएको खेलमा पर्सिजा जाकार्ताले कल्टेङ पुट्रालाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दा रोहित ‘म्यान अफ द म्याच’ बन्न सफल भए । पूरै समय मैदानमा विताएका रोहितले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
जाकार्ताको जितमा हेरी सुसान्टो, मार्को सिमिक, सान्दी सुतेले गोल गरे । खेलको १३औं मिनेटमा नै सुसान्टोले गोल गर्दै जाकार्तालाई अग्रता दिलाएका थिए । उनकै गोलको आधारमा जाकार्ताले पहिलो हाफसम्म १–० गोलको अग्रता बनाएको थियो ।
पहिलो हाफमा १–० गोलको अग्रता बनाएको जाकार्ताले दोस्रो हाफमा थप दुई गोल गर्न सफल भयो । खेलको ४९ औं मिनेटमा सिमिक र ९० औं मिनेटमा सुतेले गोल गर्दै जाकार्तालाई कल्टेङ पुट्रामाथि ३–० गोलको जित दिलाएका हुन् ।
बंगलाचुलीमा राष्ट्रपति रनिङ्सिल्ड प्रतियोगिता सुरु
इपिएलमा चेल्सीको विजयी सुरुवात
मनाङ–मस्र्याङ्दीले जित्यो आहा रारा गोल्डकपको उपाधि
ज्ञानेन्द्रको शतकमा काठमाडौंको फराकिलो जित
गौरिकाले दिलाइन् पौडीमा नेपाललाई ऐतिहासिक स्वर्ण